फेसबुकको ‘मृत्यु’ नै हुन्छ त ? | suryakhabar.com
Home सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको ‘मृत्यु’ नै हुन्छ त ?
on: १६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:४१ In: सामाजिक सञ्जालTags: No Comments
काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक धेरै पटक विवादमा आएको छ । कहिले विज्ञापनलाई लिएर त कहिले न्युज फिडमा गरेको हेरफेरलाई लिएर फेसबुक विवादमा आइरहन्छ ।
यो विवादपछि फेसबुक ‘मृत्यु’को नजिक रहेको भविष्यवाणी गरिएको छ ।
प्रोफेसर स्कट भन्छन्, ‘मानिसहरु सामाजिक सञ्जालको खेलबाट रिसाएका छन् । तर सोच्नुहोस्, उनीहरु आफ्नो रिस कहाँ पोख्छन् रु त्यही सामाजिक सञ्जालको प्लेटर्फममा १’
प्रोफेसर स्कट भन्छन्, ‘फेसबुकका औसत २।२ अरब मासिक प्रयोगकर्ता छन् । यस्तोमा ठूला कम्पनीहरुले फेसबुकलाई विज्ञापन दिनबाहेक अरु बाटो छैन । त्यसैले फेसबुकको अन्त्य यति छिट्टै हुदैन ।’ -बीबीसी
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १३:२८
१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ११:४१